Iimuvi zokubukela njengesibini: zeziphi ezilungileyo? | Ndinike ixesha lokuphola
Ndinike ixesha lokuphola
Iimuvi zokubukela njengesiqabane
UGabriela moran | | Cine, ICinema eyoyikisayo
Enye yezona zinto zithuthuzelayo onokuzenza njengesiqabane kukubukela iimuvi kwintuthuzelo yesofa. Kuya kufuneka nenze ukhetho oluza kunigcina nobabini ninomdla wokuthintela nokuba omnye wenu alale. Siyazi ukuba kunokuba nzima kangakanani ukweyisela iqabane lethu ukuba libone imovie esiyifunayo, okanye kungenjalo. Kulo lonke eli nqaku ndibonisa Ukukhethwa kweemovie ukubukela njengesibini kungekho mntu usweleyo kukudikwa.
Kukho iintlobo ezininzi, kodwa ngokubanzi kukho ezimbini ezivuselela umdla kubo bobabini nabasetyhini: ii-comedies zothando kunye neemovie ezoyikisayo! Akukho nto ifana nokuqunjelwa kumzuzu wokurhanela kwisiqwenga sothusayo! Kwelinye icala, iiqhulo zothando zenza ubumnandi, umoya okhululekile kunye nothando. Ukhetho lubandakanya inqanaba elinikezelwe ngu IMDB
Ufuna bukela ezi bhanyabhanya mahala? Zama iVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon kwaye uya kubona ezininzi zazo
1 Uthando oluphambeneyo nolusisiyatha
2 Ifayile yeWarren: Ukudibanisa
3 Unelungelo lokurabha
4 Ikhaya leenkedama
5 Ngaphandle kwesibophelelo
6 Inobuqhophololo (Ubusuku beDemon)
7 Umsebenzi uyaqhubeka… Iimuvi ukuba zibukelwe njengesibini!
Uthando oluphambeneyo nolusisiyatha
Ihlaya lezothando elakhutshwa ngo-2011 kunye Kudlala u-Emma Stone, uRyan Gosling, uJulianne More, kunye noSteve Carell. Ibali lixelelwa ngesibini kwiinkqubo zoqhawulo mtshato eziqaliswe kukuvuma ukungathembeki ngumfazi wabo. Emva kokuva iindaba ezibuhlungu, UCal (Steve Carell) udibana nomlukuhli oselula (URyan Gosling) omncedayo ukuba aphume kwimeko yakhe yoxinzelelo kwaye abelane naye ngamaqhinga akhe.
UCal uphinde azithembe kwaye aqale ukoyisa abantu basetyhini: udibana nabasetyhini abaninzi kwiimeko ezihlekisayo, phakathi kwazo utitshala wabantwana bakhe emi ngaphandle.
Ngeli xesha UJacob (Ryan Gosling) udibana noHanna (Emma Stone) ngokungalindelanga amsa ngqo kwigumbi lakhe njengenye yoloyiso oluninzi. Kungekudala, bathandana kwaye bafumanisa into edanisayo: UHanna yintombi kaCal!
Ngokucacileyo uCal uyabuchasa ubudlelwane bentombi yakhe neCasanova kwaye aqale ungquzulwano olugqibela ekufumaneni iimvakalelo eziyinyani zabo bonke abachasi.
Abayi kuyeka ukubukela le movie kunye, baya kuhleka kakhulu!
Ifayile yeWarren: Ukudibanisa
Liphefumlelwe libali eliyinyani malunga nefama apho izinto zobuntu obuqala ukwenzeka. Yakhishwa kwimidlalo yeqonga ngo-2013 kwaye yaphawula iUkuqala kothotho lweefilimu ezenziwe ngamacandelo aliqela ngokusekwe kuphando lomphandi owaziwayo: iWarrens.
Usapho luye kwifama entle apho izinto ezingaqhelekanga zenzeka ngokukhawuleza eziboyikisayo: imimoya esezikhabhathini, amanqaku angenakuchazeka emzimbeni, ngqo ubundlongondlongo ngumbutho kwilungu losapho, njl. Emva kwethutyana, umama uqhakamshelana nabayeni baseWarren, abaziingcali zeparapsychologists abaphanda amatyala angaqhelekanga.
Ngokukhawuleza iiWarrens zifumanisa inani elikhulu lokungaziphathi kakuhle kwaye uphando lwabo lutyhila imeko yomfazi owayetyholwa ngobugqwirha kwaye wayehlala efama. Wanikela ngonyana wakhe njengedini kuMtyholi ukuze azibulale kamva. Igqwirha ekuthethwa ngalo lihlala kumalungu osapho oluchaphazelekayo kwaye iiWarrens zagqiba kwelokuba zenze i-exorcism ukuze zikhuphe umoya ombi.
Uthotho lwezinto "ezikhutshelweyo" ziyavela eziyinxalenye yezinye iifilimu eziyinxalenye yelungelo lokuthengisa. Le teyiphu ngokuqinisekileyo iya kukugcina kurhanela rhoqo. Awungekhe ubukele oku okanye ezinye iimuvi kwi-franchise!
Ezinye izihloko ezikwi-saga epheleleyo zezi zilandelayo: Anabelle (2014), Warren File: The Enfield Case (2016), Annabelle: The Creation (2017) and The Nun (2018). Ukongeza, iifilimu ezintsha zibhengezwe ngo-2019.
Kudlala uJustin Timberlake kunye noMila Kunis. Eli yelenqe lisibalisela ngobomi bukaJamie, umhlohli weetalente waseNew York kunye nomlawuli wezobugcisa waseLos Angeles ogama linguDylan, onikwa ithuba lokusebenza kumagazini omkhulu waseNew York. UJamie ujongene nokucenga uDylan ukuba athathe lo msebenzi kwaye unikezela ukumsa kwisixeko saseManhattan.
Ngokukhawuleza benza unxibelelwano kwaye babe ngabahlobo. Bathetha ngezihloko ezisenyongweni kwaye bobabini bayavuma ukuba isini masingabandakanyi iimvakalelo okanye ukuzibophelela, ke umtsalane ugqityiwe kwaye bagqiba kwelokuba babelane ngesondo kwaye baqale uhlobo lobudlelwane ngaphandle kokuzibophelela Apho banokuvuleleka ekuthetheni ngayo yonke into engahambelaniyo kunye neminqweno kwindiza yesini.
Emva kokudibana okumbalwa, UJamie ufumanisa ukuba ayisiyiyo le nto ayifunayo kwaye uthatha isigqibo sokuphelisa amandla kwaye abuyele ekubeni "ngabahlobo" abaqhelekileyo. Udibana nenye indoda aqala ngayo ukuthandana ngokufutshane njengoko ehlukana nayo kuqala. Kwangoko umhlobo wakhe uDylan ummemela kumsitho wosapho ngaphandle kwedolophu ukuze amphazamise, kodwa olo hambo luya kubangela ngaphezulu kohambo nje lweempelaveki ...
Yiyo Imveliso yaseSpain eyaqala ngo-2017 kwaye ibalisa ibali likaLaura inkedama eyamkelwa isemncinci. Kwiminyaka eyadlulayo, uthatha isigqibo sokubuyela kwikhaya leenkedama apho wayehlala khona ebuntwaneni kunye nomyeni nonyana wakhe, naye owamkelweyo kodwa engenalo ulwazi ngayo. ULaura uceba ukuvula kwakhona ikhaya leenkedama njengekhaya lokuxhasa abantwana abakhubazekileyo. Unontlalontle ogama linguBenigna uthi uSimón, unyana kaLaura, une-HIV.
Ngeli xesha uSimón uxelela abazali bakhe ukuba unomhlobo omtsha ogama linguTomás osoloko enxibe imaski.
Ngexesha leqela lokuvula lezixhobo ezitsha uSimón noLaura baxoxa; lo nto umntwana uyabaleka azimele kunina. Ngelixa uLaura amkhangela, ubaleka enkwenkweni enesigqubuthelo sengxowa esimtyhalayo kwaye simvalele ngaphakathi kwigumbi lokuhlambela. Emva kokuhamba, ufumanisa ukuba unyana wakhe ulahlekile kwaye akakwazi ukumfumana. Kwiinyanga ezintandathu kamva, inkwenkwe ayisekho kwaye uLaura udibana noBenigna kwakhona, ofumana ingozi ebulalayo eveza inyani ngobomi bakhe: wayenonyana ogama linguTomás kwaye wayesebenza kwikhaya leenkedama uLaura analo ngoku.
ULaura ufuna uncedo oluphakathi ukuze afune uSimón kwaye umxelela ngentlekele enkulu eyenzeka kuloo ndawo kwiminyaka eyadlulayo. Ekugqibeleni ufumanisa indlela yokufumana unyana wakhe kwakhona kwaye uyayiqonda inyani eyoyikekayo yento eyenzekileyo kuSimon.
Ukuhlekisa ngothando U-Ashton Kutcher kunye no-Natalie Portman. Iitshomi ezimbini zobuntwana ziyahlangana kwakhona kwaye ziphela kubusuku obushushu besini. Ngosuku olulandelayo bayayifumana loo nto Akukho mfuneko yokuba babenobudlelwane kwaye ayisiyiyo le nto bayifunayo ngalo mzuzu, ke bagqiba kwelokuba baqhubeke njengabahlobo kwaye ngaphandle kokuzibophelela okukhulu.
Baphuma ngomhla wesidlo sangokuhlwa kunye notata ka-Adam obhinqileyo (uAshton Kutcher) othandana nentombi yakhe yangaphambili kunye nesidlo sangokuhlwa esingaqhelekanga nesingonwabisiyo.
Baqhubeka namandla de uAdam aqonde ukuba uyathandana noEmma (Natalie Portman) kwaye uthatha isigqibo sokumphumelela, nangona kunjalo konke okuphumelelayo kukumtyhalela kude. U-Emma uyafihla emva komsebenzi wakhe esibhedlele ade afumanise ukuba uthando lwabo omnye komnye alunakuphikwa.
Inobuqhophololo (Ubusuku beDemon)
Umboniso bhanyabhanya owoyikisayo
Isavenge sokuqala se-saga sakhutshwa ngo-2011 kwaye Isiza sigxile kusapho unyana wakhe awela isiqaqa kwaye ahlaselwe ngumoya ombi. Utata nomama nguJosh noRenai ngokwahlukeneyo. Usapho luqala ukuhlangabezana neemeko ezoyikisayo nezingaqondakaliyo. ULorraine, unina kaJosh, uza kumnceda umhlobo wakhe uElise Reiner: Umfazi onezipho ezizodwa ozinikele ekuncedeni abantu kwiimeko ezinxunguphalisayo. Unako ukunxibelelana nabantu, imimoya, kunye needemon ezivela ngaphaya.
Xa uElise etyelele le nkwenkwana kuthethwa ngayo, uchazela abazali ukuba unyana wabo akakho zingqondweni. Kodwa ine ukukwazi ukuqikelela i-astral ngexesha lokulala kwaye ulahlekile kakhulu emzimbeni wakho, yiyo loo nto ilahlekile kwaye ingenakubuyela kuyo.
ULorraine utyhila ukuba ngunyana wakhe UJosh, utata wosapho, naye unamandla afanayo okwenza isigqibo sokuba uJosh aye kufuna unyana wakhe ngolunye lolo hambo. Kwelinye ilizwe, udibana nonyana wakhe kwaye ufumanisa ukuba bobabini bazingelwa yidemon abakwaziyo ukubalekela kuyo.
UJosh nonyana wakhe bakhuselekile! Nangona kunjalo, uElise ufumanisa inyani eyoyikisayo ebiza ubomi bakhe.
I-saga ukuza kuthi ga ngoku ibandakanya iifilimu ezine apho uElise Reiner uhamba nathi kuhambo oloyikekayo kunye nokujongana needemon ezingenalusini. Amagama ezi sequels aNgabonakaliyo kwiSahluko 2, Isahluko 3 kunye nesitshixo sokugqibela.
Umsebenzi uyaqhubeka… Iimuvi ukuba zibukelwe njengesibini!
Azisekho izizathu! Akusayi kubakho mfuneko yokulala ... Ukhetho olwenziweyo kunye neefilimu ozibukeleyo njengesibini kwaye olubandakanya ii-comedies ezintathu zothando kunye neefilimu ezintathu ezoyikisayo zisinika ukhetho olufanelekileyo lokuzonwabisa. Thatha isigqibo: Uloyiko okanye uthando?
Yenza i-popcorn kunye nesiselo esihlaziyayo! Yonwabela iimuvi ozikhethile emva kwemini okanye umdyarho wempelaveki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » Cine » Iimuvi zokubukela njengesiqabane
Eyona midlalo yeTV i-90s
Uthotho lweTV olugqwesileyo ngo-2018